Allgedo.com » Maxamuud Sayid Aden oo Xariga ka jarey Mashaariic oo laga hergeliyey Baardheere (Dhageyso+Sawwiro)
Madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Dowlad Goboleedka Jubbaland iyo Wafdi balaaran uu hogaaminayo ayaa Maanta soo gaarey Magaalada Baardheere, iyadoo ujeedadada Wafdiga Madaxweyne ku xigeenka oo ay ka mid ahaayeen Xubno Wasiiro ah ay la xariirtey furitaanka 4 mashruuc oo dhowaan dhismahooda la soo gunaanadey.
Dhismayayaasha sida rasmiga ah loo furey ayaa waxaa ka mid ahaa Xarunta Maamulka degmada Baardheere, Xarunta Bulshada, Garoonka kubada Cagta iyo Togaga biyo mareenada,Xafladii lagu fureyay Mashraaciidaasi oo si heer sare loo soo agaasimey ayaa waxaa ka qeyb galey Boqolaal dadweyne ah oo isugu jiray mas,uuliyiinta Maamulka Gobolka Gedo, kan degmada Baardheere, Odoyaasha dhaqanka, haweenka iyo qeybaha kale duwan ee Bulshada Baardheere.
Xubnaha Maxamuud Sayid Aden ku weheliyey Safarka shaqo oo si heer sare ah loo soo dhaweeyey ayaa waxaa ka mid ahaa Sh.Maxamed Aw libaax oo ah Wasiirka dhlinyarada iyo Isboortiska,Maxamed Cabdi Kaliil oo ah Wasiiru dowlaha Arimaha gudaha ee Jubbaland ,C/raxmaan Cabdi xuseen,wasiir ku xigeenka A/Gudaha iyo xubno kale.
Maxamuud Sayid Aden oo ka hadlaayey Xaflada furtaanka ee dhismayaasha laga hergeliyey Baardheere ayuu ku amaanay Maamulka degmada Baardheere iyo hay,adahii gacanta ka geystay dhismayaashan,isagoona ugu mahadceliyey Midowga Yurub iyo SSF oo suurta geliyey dhismayayashan in ay dhaqaalo ku bixiyeen.
Mashaariicdan ayaa noqonaya kuwii ugu balaarnaa ee laga hergeliyo degmada Baardheere, dhinaca kalena Waa markii ugu horeysay wafdi balaaran oo ka socda Jubbaland ay soo gaaraan Magaalada Baardheere.
Halkan ka dhagayso Maxamuud Sayid